Forex Trading ၏ Start မှမည်သို့ - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ဧပြီလ 1, 2020
ပင်မစာမျက်နှာForex ကျောင်းစာအုပ်Forex Trading ၏ Start လုပ်နည်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် Forex ကျောင်းစာအုပ် 0
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့မတ်လ 2020
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့မတ်လ 2020 - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ - FX စက်ရုပ်
သင်တစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုစတင်ပါတော့မည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာသင့်စီးပွားရေးအသစ်များအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများအရပျ၌တည်ရှိ၏။ ဒါဟာတစ်နှစ်ဆယ်လေးနာရီပေါ်အခြေခံစျေးကွက်စေရန်အင်တာနက်ကတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုကြောင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်များနှင့်ငွေကြေးကုန်သည်တွေတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် ငွေကြေးကုန်သည်တွေကမ္ဘာ့တစ်လျှောက်လုံး, ကျယ်သေးငယ်။
မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဲ့သို့ပင်, သင်သည်တိတ်ဆိတ်ကြောင်းတစ်ရုံးလိုအပ်ပါတယ်အဆင်ပြေများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ် အခမဲ့ အာရုံပြံ့လှငျ့၏။ အဆိုပါရုံးတစ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်တဲ့အစာရှောင်အားကိုးကွန်ပျူတာတပ်ဆင်ရပါမည်။ ဒါဟာပေါင်းစပ်တတူ, ပရင်တာနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်ဖက်စ်ရှိသည်ဖို့အမြဲကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်။
စပ်စု Be နှင့် Forex အကြောင်းကိုသင်လုပ်နိုင်သည်အားလုံးလေ့လာသင်ယူ
တစ်ဦး Forex ပွဲစားကို Select လုပ်ပါနှင့်အသေးစားအမြောက်အမြားနှင့်အတူစစ်မှန်သောကုန်သွယ်စတင်
အစွန်း tools များနှင့်စနစ်များဖြတ်တောက်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်တပ်ဆင်
1 ။ Curious Be ပြီးတော့ Forex အကြောင်းကိုသင်နိုင်သလားအားလုံးလေ့လာပါ။
ကျနော်တို့အဘို့အ Forex အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့ကျောင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးအပ်ခဲ့ကြ အခမဲ့။ ကျနော်တို့အခြေခံနှင့်ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်. ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ပညာပေး, အပေါငျးတို့သဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုဖို့သငျသညျအကြံပေး, အဲဒီနောက်ငွေကြေးတိကျတဲ့အခြေခံအပါအဝင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြေခံညွှန်းကိန်းအကြောင်းဖတ်နေ။
သင့်ရဲ့သင်ယူမှုသို့သော်ငါတို့၏ website နှင့်အတူအဆုံးသတ်သင့်ပါဘူး။ ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းအွန်လိုင်းတစ်ဥစ္စာဓနရှိပါသည်: ပညာရေးဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တူသောက်ဘ်ဆိုက်များအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တူသော Forex related ဖိုရမ်များများများရှိပါတယ်။ အဆိုပါဖိုရမ်ကွန်ယက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစုံ၏အခြားသူများနှင့်ဆက်ဆံဖို့ကောင်းတစ်ဦးလမ်းဖြစ်ကြသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်သည့်မေးခွန်းမေးနိုငျနှင့်ဘာသာရပ်အပေါ်ညာဘက်အသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုသင်ကဖြေဆိုရန်ခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်။ တစာကြည့်တိုက်မှာဖတ်ပါသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းယ်ယူနိုင်ပါသည်ကောင်းသော Forex ပညာရေးစာအုပ်တွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ်။
Read, CD ကိုနားထောင်, နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့, နေ့စဉ်ဖိုရမ်များကိုဖတ်နှင့်သင့်တှေ့ရှိထားခါအသိပညာကျင့်သုံးပါ။ သငျသညျကုန်သွယ်အကြောင်းကိုသိရန်ရှာခြင်းငှါအရာခပ်သိမ်းပြီးသားကျမ်းစာ၌ရေးထားသို့မဟုတ်အောင်မြင်သောကုန်သည်များကအကြောင်းကိုပြောပြီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဤပညာရေးများအတွက်ပေးဆောင်နိုင်နေစဉ်, ကအများစုအဘို့အတွေ့နိုင်ပါသည် အခမဲ့။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအရာတစ်ခုခုကိုသင်ယူဖို့ကြိုးစားပါ။
ဒါပေမယ့်သင်ယူမှုပဲဖတ်နေနှင့်နားထောင်ခြင်းသည်မဟုတ်။ သင် (ပထမတစ်သရုပ်ပြအကောင့်ထဲမှာ, ပြီးတော့တစ်ဦးကိုမှန်ကန်အကောင့်ထဲမှာ) သင့်ကုန်သွယ်လေ့ကျင့်ရန်ရှိသည်, ထိုဖြစ်ပါသည်, လုပျရမယျ။
2 ။ တစ်ဦးကသရုပ်ပြအကောင့်များတွင်စက္ကူကုန်သွယ်ရေး Forex
သငျသညျ Forex ကုန်သွယ်ဖူးဘူးဆိုပါကတစ်ဦးအတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ချွတ်စတင်ရန်ကျေးဇူးပြုပြီး MT4 သရုပ်ပြအကောင့်။ Demo အကောင့်အသုံးပြုသူများကိုတိုက်ရိုက်ဒေတာနှင့်အတူကုန်သွယ်လေ့ကျင့်ဖို့ "ပိုက်ဆံ play" ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပါ။ သင်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ "စစ်မှန်သော-ပိုက်ဆံ" အကောင့်နဲ့အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါလျှင်အဖြစ်သူတို့တစ်တွေအလွန်ဆင်တူအတွေ့အကြုံကိုဆက်ကပ်။ သင်တစ်ဦး "စက္ကူထရေးဒင်း" အကောင့်ဖန်တီးပြီးတာနဲ့သင်ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခက်ခဲငွေသားဖြစ်လျှင်အဖြစ်ကစားပိုက်ဆံကုန်သွယ်မှုနိုင်ပါတယ်။
ဤအသရုပ်ပြကုန်သွယ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုငွေကြေးစျေးကွက်ပလက်ဖောင်းမည်သို့ပြုမူ, ဘယ်လိုပြုမူ, သင်စျေးကွက်အပေါ်သက်ရောက်မှုကြောင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြေခံအခွအေန၏မျက်နှာကိုအတွက်ဘယ်လိုပြုမူကြည့်ပါနိုင်ပါလိမ့်မည်အကောင့်။ သင်အတွေ့အကြုံကနေသင်ယူဖို့လိုလျှင်သင်ကအလေးအနက်ထားဒီသရုပ်ပြအကောင့်ကုသရပါမည်။
ကျနော်တို့နှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်၏အားကြီးသောထောက်ခံသူများဖြစ်ကြ Metatrader (MT4) က Forex ကုန်သည်များနှင့်ပွဲစားများအဘို့ရှေးခယျြမှုများ၏ပလက်ဖောင်းရဲ့လို့ပဲ။ ဒါဟာအခမဲ့စွယ်စုံနှင့်ရိုးရှင်းပြီးခေတ်မီဆန်းပြားကို manual နဲ့ automatic ကုန်သွယ်ဘို့ခွင့်ပြုမြောက်မြားစွာကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး, ကိရိယာများ, အညွှန်းကိန်းများနှင့် script များတပ်ဆင်ထားလာပါတယ်။
တစ်ဦးကိုရှာဖွေနေသည့်အခါ MT4 သရုပ်ပြအကောင့်အများစုသာနောက်ဆုံး 1-3လအတွင်းသတိပေးပြီးတော့သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါစေ။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲနောက်ဆုံးမှသာလူနည်းစုဖြစ်ပါသည်, သည်, သူတို့ကဤမျှကာလပတ်လုံးသင်တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ပေါ်မှာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြတယ်အဖြစ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးကြပါဘူး။ ငါသိသာအကြောင်းပြချက်များအတွက်သရုပ်ပြအကောင့်ကုန်ဆုံးမည့်အဆိုပါ 1-3 တစ်လနှိုင်းယှဉ်သည့်အစဉ်အမြဲသရုပ်ပြအကောင့်ကြိုက်တတ်တဲ့။ သငျသညျကိုဒေါင်းလုဒ်နှင့်သင့်သရုပ်ပြ install လုပ်ပြီးရင် "File" ပေါ်တွင် click နှိပ်ပြီးအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အကောင့်တခုဖွင်ကိုဖွင့်။ " ဒါဟာထို့နောက်သင့်အခြေစိုက်စခန်းငွေကြေး, သြဇာများနှင့်စတင်ငွေပမာဏကိုရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူသင့်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အတွက် key ကိုသင်မေးပါလိမ့်မယ်။ သိုက်သရုပ်ပြငွေပမာဏကိုသငျသညျအနာဂတျတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကောင့်ထဲမှာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်မျှော်လင့်သောအရာကိုဆင်တူဖြစ်သင့်သည်။
သငျသညျခကျြခငျြးတစ်သရုပ်ပြ account ဖန်တီးပြီးပြီးနောက်သင်၏ login နဲ့ password ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ ကော်ပီကူးခြင်းနှင့် paste သင်၏ login နဲ့ password တစ်ခု .txt ဖိုင်ကိုရန်နှင့်လုံခြုံရာဌာန၌သိမ်းထားဖို့သတိရပါ။ သင်ကဆုံးရှုံး အကယ်. သင်သည်သင်၏ပွဲစားမခေါ်လျှင်ပင်နောက်တဖန်ပြန်လည်ရယူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကျနော်တို့ကိုမှန်ကန်မြို့တော်ကျူးလွန်မတိုင်မီပထမဦးဆုံးတစ်ဦးသရုပ်ပြအကောင့်မှာမိမိတို့သင်ယူမှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ကြောင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သင်ယုံကြည်ကိုးစားဆောကုန်သည်များတိုက်တွန်းပါသည်။ သင်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်အကောင့်ထဲမှာကုန်သွယ်မှီတိုငျအောငျကဆိုပါတယ်ခံရကြောင်း, သင်အမှန်တကယ်တစ်ကုန်သည်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မသိကြပါ။
3 ။ တစ်ဦးကကောင်းမွန်သော Forex ပွဲစားနှင့်အတူရီးရဲလ်ထရေးဒင်းကြိုးစားပါ
သရုပ်ပြကုန်သွယ်လိုအပ်သော်လည်း, သင်နောက်ဆုံးမှာလိုင်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောငွေနှင့်တကယ့်အကောင့်ထဲမှာကုန်သွယ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်။ သငျသညျအနညျးဆုံးအနိမ့်ဆုံးတွေအများကြီးအရွယ်အစားနဲ့အစစ်အမှန်အကောင့်နဲ့ကုန်သွယ်မှုသည်အထိသင်အမှန်တကယ်သင်တစ်ဦးကုန်သည်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ပုံကိုသိတော့မှပါလိမ့်မယ်။ (စသည်တို့ကိုလောဘ, ကြောက်ရွံ့ခြင်း, အတ္တ,) ကုန်သွယ်အားလုံးသည်လူ့န့်အသတ်သာစမ်းသပ်ပြီးနှင့်အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံရှယ်ယာမှာအခါထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ထိုအရပ်မှရွေးချယ်ဖို့အများအပြား Forex ပွဲစားများရုံကိုအခြားဈေးကွက်၌ရှိသကဲ့သို့, ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါတို့သည်သင်တို့သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလုပ်ကိုကူညီဖို့ "တစ်ခု Forex ပွဲစားရွေးချယ်ခြင်း" တစ်ဦးပြည့်စုံအပိုင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ သင်ကပွဲစားသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များအားငါပေးမည်နှင့်အကောင့်အကျိုးဆောင်များကခွင့်ပြုချက်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောခရက်ဒစ်ကဒ်, ဘဏ်ဝါယာကြိုး, PayPal က, MoneyBookers, WebMoney သကဲ့သို့, ပွဲစားပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးရန်ပုံငွေ options များအားဖြင့်သင်တို့၏အတည်ပြုအကောင့်ရန်ပုံငွေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာချက်ချင်းဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နည်းလမ်းပေါ် မူတည်. တစ်ဦးရက်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါသည်။
သငျသညျအကောင်းတစ်ဦး Forex ပွဲစားဘို့ browsing အခါအောက်ပါမေးခွန်းများကိုမေးပါ:
အဆိုပါ Is FX ပွဲစားရဲ့အလုံလောက်အောင်အနိမ့်ကြက်သလော
အဆိုပါ Is FX စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ပွဲစား client ကိုစိတ်ဝင်စားမှုကာကွယ်ရည်ရွယ်?
အဆိုပါအဘယျသို့သော tool များ၏မ FX ပွဲစားများကို?
ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု၏အဘယျအမျိုးအစားမ FX ပွဲစားများကို?
သငျသညျလုံလောက်သောအရင်းအနှီးမရှိဘူးလျှင်, ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေး FX ပွဲစား, သေးသောအနိမ့် startup ရန်ပုံငွေများလိုအပ်ကြောင်းအသေးစားအကောင့် mini ကိုသို့မဟုတ်ပိုကောင်းကမ်းလှမ်း?
4 ။ Edge Tools များနှင့်စနစ်များဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အတူကိုယ်သင်တပ်ဆင်။
အနုပညာကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းနှင့်ဇယားဆော့ဖ်ဝဲကိုသင့်ရဲ့ပြည်နယ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သင်တို့အဘို့ရှိသည် အခမဲ့ သင့်ရဲ့ download, အတူ Metatrader4(MT4) ။ MT4 သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်, ပြုလုပ်အသုံးဝင်သောအညွှန်းကိန်းများနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများ၏နံပါတ်တပ်ဆင်ထားပြီးသားလာအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အထက်က အခမဲ့ နှင့်ကုန်သည်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏အသုံးပြုနေကြသည်။
ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကုန်သည်များကိုကူညီမတ် coder တွေကတီထွင်အစွမ်းထက်ညွှန်းကိန်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး (ကွက်) အတွက်ဝဘ်နှင့်ဖိုရမ်များဖြီးရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။
ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးကို EA လို့ခေါ်တဲ့ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး, တစ်ဦး Forex ဖြစ်ပါသည် ရောဘတ်စက်ရုပ် တဦးတည်းရဲ့အပေါ် 100% စက်မှုကုန်သွယ်များကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲ MT4 ပလက်ဖောင်း။ အဆိုပါ EA ပရိုဂရမ်ကုန်သွယ်အခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ. ဝယ်ရောင်းချခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက်စျေးကွက် 24 /7စောင့်ကြည့်။ အတော်များများကကွက်များအတွက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် အခမဲ့ အင်တာနက်ထဲမှာမတူညီတဲ့အရပ်တွင်။ သော်လည်းရှိပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ပိုအများအပြားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ရောဘတ်စက်ရုပ် ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးတစ်နေရာရာမှာ $ 90 နှင့် $ 300 အကြားရောင်းချကြပါတယ်, ခြားနားသည်။ သို့သော်ဝယ်လက်သတိထားဖို့: တချို့စက်ရုပ် Scan ကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အရှိဆုံးစက်ရုပ်သင်သည်အစဉ်အစဉ်အဆက်ကသူတို့အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ထက်ရောင်းချသူချမ်းသာစေမည် ရောဘတ်စက်ရုပ်။ တကယ်တော့အများစုစက်ရုပ်ကြောင့်သင်တို့ကိုစျေးကွက်သည်အလွန်အန္တရာယ်များသည်နှင့်စက်ရုပ် 95% ကုန်သည်များ 95% ပျက်ကွက်သောတူညီသောအကြောင်းပြချက်အချို့အဘို့ပျက်ကွက်သောရိုးရှင်းသောအချက်ကိုအနိုင်ရရှိထက်ပိုပိုက်ဆံဆုံးရှုံးကူညီပေးပါမည်။
5 ။ Forex Trader ရဲ့အဖြစ်များသည့်အမှားမျိုးကိုရှောင်ပါ။
တစ်မ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရ, သင့်စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကိုရှောင်ကြဉ်မှာတော့မကောင်းတဲ့ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုကိုရှောင်ရှား, သင့်ရာထူးမှာ Over-နေရှောင်ရှား, Over-အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သင့်အကောင့်ကိုရှောင်ရှား, သင် Forex ကုန်သွယ်အတွက်မတတ်နိုင်သောအရာကိုဒီလောက်စွန့်ရှောင်ကြဉ်ပါ။ Forex ကုန်သွယ်အန္တရာယ်များနှင့်ကုန်သည်များအများကြီးအမြဲတစ်ချိန်တည်းအတွက်ကုန်သွယ်မှုနှင့်သင်ယူရန်အကြံပေးကြသည်ပါဝငျသညျ။ အများဆုံး Forex ကုန်သည်များကဖန်ဆင်းဘုံအမှားတွေကိုသတိထားဖြစ်လာနှင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေစဉ်အတွင်းသင့်ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေသတ်မှတ်ထား FX ဈေးကွက်။ စည်းကမ်းနှင့်အတူကုန်သွယ်ရေးနှင့်အမြဲအခြားသူများထံမှအသစ်သောသဘောတရားများကိုသင်ယူဖို့ပြင်ဆင်လော့။
6 ။ သင့်ရဲ့ထရေးဒင်းပညာရေးခုနှစ်တွင် Investing ထားပါ။
ကျနော်တို့ရုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပညာရေး၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေးရပ်တန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ Forex ၏ဤလောကသို့သင့်ရဲ့အကျိုးတူအတွက်စတင်အရှိဆုံးအရေးပါအရာဖြစ်၏။ သငျသညျ Forex ကုန်သွယ်အသစ်ဖြစ်ကြလျှင်, သင်လက်ပေါ်အတှေ့အကွုံရသလောက်ဖတ်သင်သည်တတ်နိုင်သလောက်လေ့လာသင်ယူရမယ် FX နှင့်စပ်လျဉ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာပေးရန်စာအုပ်များနှင့်အွန်လိုင်းဆောင်းပါးများကိုသင်လုပ်နိုင်သည်အဖြစ် FX ဈေးကွက်။ သငျသညျသိချင်စိတ်, အချိန်နှင့်အသိပညာတွေအများကြီးဆည်းပူးဖို့အလိုဆန္ဒလိုပါတယ်။ သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီပြီးတာနဲ့ကြောင့်အန္တရာယ်များသို့ကြည့်ယူဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်ခက်ခဲခေါက်နှင့်အတွေ့အကြုံ၏ကမ္ဘာမှသင်ယူခြင်း, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနှင့် Forex ကုန်သွယ်နှင့်ကုန်သွယ်မှုအတွက်ဆခွဲကိန်း။
အဆိုပါ Forex ဈေးကွက်ထဲမှာအောင်မြင်မှုသည်းခံခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကြွလာ။ တချို့ကကုန်သည်များအနည်းငယ်မျှသာလေ့လာမှုအပြီးတွင်သူတို့သစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ ဒါဟာပညာရှိသောသူအများအပြားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဆိုပါတယ်သောအရာကိုမှတ်မိဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
နက်ရှိုင်းသောစပျစ်ရည်သောက်ပါသို့မဟုတ်မဟုတ်မြည်းစမ်း Pierian နွေ
အနည်းငယ်အောင်မြင်သောအရောင်းသူတို့ကိုမမှန်သောယုံကြည်မှုချီးမွမ်းစေခြင်းငှါအဖြစ်ကနဦးတွင်အောင်မြင်မှုပျော်မွေ့သောသူကုန်သည်ကြီးများမကြာခဏနောက်ပိုင်းတွင်စျေးနှုန်းပေးဆောင်။ ထိုအခါသူတို့ကလေ့လာသင်ယူ, ဖြစ်ကောင်းပိုကြီးရာထူးကုန်သွယ်မှု, သူတို့ရဲ့မြို့တော်အများကြီးဆုံးရှုံးဖို့လည်းငြိမ်း။ အခွင့်အလမ်းများကိုတစ်ဦးတစ်သက်တာရှိသောကြောင့်ထိုသို့သင်၏အချိန် ယူ. လေ့လာသင်ယူရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးထရေးဒင်း Forex ပလက်ဖောင်း
Forex စက်ရုပ်ကြောင်းသူ Work
Forex Trading ၏စက်ရုပ်
အခမဲ့ Forex Trading ၏အကောင့်ကို
ထရေးဒင်း Forex လုပ်နည်း
Start ကို Forex Trading ၏
တစ်ဦးကောင်း Forex ပွဲစားနှင့်အတူရီးရဲလ်ထရေးဒင်းကြိုးစားပါ
ထရေးဒင်း Forex Start မှငါသည်အဘယ်သို့လိုအပ်သလား
ဤသည် antispam ကာကွယ်မှုအောက်တွင်ဖွဲ့စည်းပုံ